Maqaallada ku saabsan Pakistan
Sidee loo codsadaa Visa-ka Pakistan?
February 8, 2021 Maitri Jha Pakistan, fiisada
U hel fiiso Baakistaan: Baakistaan ​​waxaa laga yaabaa inaysan noqon meel ku yaal liiska safarkaaga. Arimaha amniga awgood martida iyo deggaba. Arrimahan ayaa ka dhigay wax aan macquul aheyn in Mareykanku yimaado Pakistan. Laakiin, si looga hortago dalxiisayaal badan oo dalxiis leh
Kharashaadka safarka Pakistan
Baakistaan ​​intee in le'eg ayey ku kacaysaa dib u noqoshada boorsada? Jawaabaha oo dhan ayaa adiga lagugu siin doonaa iyada oo loo marayo warbixinta miisaaniyadda. Burburin magaalo-magaalo ah, celceliska kharashka ku baxa kharashyada guud, iyo soo-jeedinta miisaaniyadda ayaa lagu daray. Gudaha Baakistaan,
October 20, 2020 Antika Kumari Shiinaha, Pakistan, safarka
Baasaboorada Baasaboorka Pakistaan ​​heysta ayaa laga reebay fiisooyinka. Oo waxaa laga yaabaa inuu sii jiro illaa 30 maalmood gudaha Shiinaha iyo illaa 14 maalmood Shiinaha Hong Kong SAR iyo Macao SAR. Baasaboorka rasmiga ah ee Pakistaan ​​heysta waa laga reebay fiisooyinka.
Qaabka Gaadiidka ee Pakistan
June 17, 2020 Antika Kumari soo qaado, Pakistan
Gaadiidka Baakistaan ​​aad buu u ballaadhan yahay waana kala duwan yahay, laakiin weli wuxuu ku jiraa marxaladihiisa horumarineed. Waxay u adeegtaa dad ka badan 200 milyan. Shabakadda gaadiidka ee Pakistan waxay ka kooban tahay waddooyinka waaweyn, jidadka tareennada, dekedaha, gaadiidka dadweynaha, iyo adeegyada rarka. Qiyaas ahaan
Pak Jobs, Shaqada iyo Shaqada ee Pakistan.
Waxaa laga yaabaa 4, 2020 Karuna Chandna shaqo, Pakistan
SHAQAALAHA IYO NOLOSHADA PAKISTAN EE TILMAANTA DUGSIGA GUUD Miyaad isu diyaarineysaa inaad ku noolaato iyo ka shaqeyso Pakistan? Mise hore baad u tahay qof hore u ahaa oo aad dhowaan u guurtay Islamabad, Karachi ama magaalo kale oo caalami ah oo Pakistan ah? Shaqo hel
Hoteel raqiis ah oo Fiican
Baadh oo raadso Hoteello ku yaal Pakistan Waddo gogoldhaaf ah oo u dhaxaysa Bariga Dhexe iyo Aasiyada Dhexe, Pakistan ayaa hoy u ahayd dadyow badan iyo dhaqammo qarniyo badan. Waxa hadhay waa mid ka mid ah waddamada ugu xiisaha badan Aasiya, oo aad u ballaadhan
Daryeel caafimaad ee Pakistan
Nidaamka Bixinta Daryeelka Caafimaadka (HCDS) waa qabanqaabada ugu wanaagsan ee u adeegta bulshada dal kasta oo leh hufnaan, hufan, qaybinta kheyraadka, iyo lacagaha kaabayaasha abaabulan si ay sifiican ugu guuleystaan. Caalamka, HCDS waxay noqotaa adeeg aad u sarreeya oo dhaqso u koraya
Malls ugu Fiican Pakistan
Dukaamaysigu waa hiwaayadda ugu weyn sidoo kale waxay haweenka ka dhigtaa mid faraxsan oo qalalaase ayaa jirta oo dumarka keliya ay jecel yihiin wax adeegsiga. Haddii la siiyo meherad laga dukaameysto, ragga waxay ku sii jeedaan dhanka wax iibsashada. Dhawr sano ka dib, Pakistan ayaa ahaa
Dulmarka guud ee Bangiyada ku yaal Pakistan Bangiga Dawladda ee Pakistan (SBP) waa bangiga dhexe ee waddanka. Waxaa lagu daray Sharciga Bangiga Gobolka ee Pakistan, 1956. Bangiga dhexe ayaa mas'uul ka ah nidaaminta xisaabaadka iyo hubinta hufnaanta dalka
Waqtiga ugufiican ee lagu booqdo Baakistaan
Pakistan waa wadan si isdaba joog ah loo fahmo. Waxay soo martay xilliyadeedii jahwareerka, laakiin dalxiiska ee waddanka ayaa si joogto ah u soo kacayay sannadihii la soo dhaafay. Pakistan waa hoyga mid ka mid ah ilbaxnimada ugu da'da weyn ee